Archive du 20200109
Governemanta Minisitra maro hangoron’entana ?
Ho feno tanteraka amin’ny faramparan’ity volana janoary ity ny enim-bolana roa hahafana manao tombana ny governemanta tamin’ny asa vitany satria nisy ilay “contrat-programme” nambaran’ny filoha.
Hanitra Razafimanantsoa “Samy tompon’andraikitra amin’ny ataony io e !”
Fanamafisana izay voalazan’ny CENI ny nambaran’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana, hoy ny depiote Hanitra Razafiamantsoa manoloana ny fandavana ny fitoriana nataon’ny kandida Rina Randriamasinoro.
Resaka nosy Malagasy Manahy ny Otrikafo
Isan’ny adihevitra nametraka ny lanjany namaraparana ny taona 2019 ny resaka nosy malagasy raha ny fijerin’ny avy eo anivon’ny antoko politika Otrikafo azy.
Tetikasan’ ny filoham-pirenena Andrasana fatratra mba tsy hampanofinofy fotsiny…
Rehefa fanombohan’ ny taona toy izao dia samy maminavina ny hoaviny ny tsirairay. Mba ahoana ny hoavin’ ny firenena sy ny vahoaka amin’ ity taona 2020 ity ?
Fidel Razara Pierre Andrasan-dRajoelina an-kendritohana…
Fiantsoana tsy nisy votoatiny ny fiantsoana nataon’ny Filoha Rajoelina. Midika fiantsoana fa tsy fanasana ilay izy, hoy ny solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny TIM Fidel Razara Pierre. Mifanohitra amin’ny andininy faha-94 ny fiantsoan’ny filoha ny parlemantera,
Rina Randriamasinoro “Tsy maintsy hiady ho an’ny marina aho”
Nolavina ny fitoriana rehetra nataon’ny kandida Rina Randriamasinoro teo amin’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana. Isan’ny notakiana tao anatin’ny hetsika maro nataon’izy fikatsahana ny fahamarinana ny fangatahana ny fampitahana ny lisi-pifidianana,
Jean Eric Rakotoarisoa « Taona Zina ho an'ny Malagasy ny 2020 »
Noho ny tonon-taona vaovao, dia tonga niarahaba sy nitondra ny firarian-tsoa ho an'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady ny mpikambana ao amin'ny Fitsarana Avo momban'ny lalàmpanorenana (HCC),
Eo am-piandrasana ny voka-pifidianana avoakan’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana isika izao, hoy ny mpitari-tolona eo anivon’ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hala-bato sy hoso-pifidianana na MCFIE,
Fanaovan-gazety Fianarana isan’andro, hoy ny OJM
Toy ny fanao isan-taona dia notontosaina tetsy amin’ny biraon’ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony momban’ny fiarovana ny zom-pirenena sy ny demokrasia eto Madagasikara,
Baolina kitra Ligue 1 eto Analamanga Eny Andralanitra no ho tanterahina andro faha-9 sy andro faha-10
Fantatra izao fa eny amin’ny kianja sentetikan’Andralanitra no hanatanterahina ny andro faha-9 sy ny andro faha-10 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny
Barean’i Madagasikara Nihazakazaka ny fisandratany
Nampitolagaga ny zava-bitan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na Barean’i Madagasikara tao anatin’ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika 2019 ho an’ny baolina kitra.
Baolina kitra aty Afrika Fantaro ireo vaovao tsara ho tadidiana
-Ny ekipam-pirenena Alzeriana no nandrombaka ny anaram-boninahitra "Meilleure équipe de l'année 2019" taty Afrika narahan’i Senegal sy Madagascar.
Marco Ilaimaharitra Nahazo zazalahy kely
Nitombo indray ny fianakaviana Ilaimaharitra. Nahazo zazalahy kely ilay irakiraka afovoan’ny ekipam-pirenena Malagasin’ny baolina kitra,Marco Ilaimaharitra.
Niverina indray ny fanapahan-kevitra mitovitovy amin’ny azo raisina fa tsy mitombina tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna.
Adin’i Etazonia sy Iran Ampoizina ny fiakaran’ny solika
Tsy maintsy hisy akony amin’ny fanjifana solika eto amin’ny firenena ny gidragidra amin’ny Iran sy Etazonia.
Orinasa afaka haba Ifanotofana ny fitadiavana asa
Filaharana lava be no tsikaritra manoloana ireny orinasa afaka haba ireny amin’izao fotoana izao.
Fokontanin’Ankorondrano Atsinanana Fianakaviana 50 tafo dibo-drano tanteraka
Velon-taraina ireo mponina eny amin’ny fokontany Ankorondrano Atsinanana amin’izao fotoana izao noho ny rano tafiditra ao an-trano.
Ora-nikija teto Antananarivo Olona 4 maty, 371 traboina
Dibo-drano tanteraka Antananarivo noho ny oram-be nikija omaly tolakandro. Saika difotra ny ankamaroan’ireo toerana iva, toa an’i Besarety, Andravoahangy, Isotry, Anosy,
Olan’ilay “Panier Garni” Nitokona ny mpampianatra, nalefa nody ny mpianatra
Nalefa nody avokoa ireo mpianatra mandranto fianarana eny anivon’ny liseam-panjakana teto an-drenivohitra, omaly.
Vono olona mahatsiravina Nokapohina ny lohany, noratraina ny fivaviany
Nahitana fatim-behivavy iray tao ambadiky ny toerana filalaovam-baolina manamorona ny ranomasina ao Analalava ny alin’ny alatsinainy 6 janoary lasa teo.
Tetikasa Tanamasoandro Fianakaviana 146 no efa nanaiky hivarotra ny taniny
Fianakaviana miisa 146 hatreto no fantatra fa efa nanaiky ny hivarotra ny taniny amin’ny Fitondram-panjakana mikasika ny fanatanterahana ilay tetikasa Tanamasoandro izay hatomboka etsy Ambohitrimanjaka.
Tahiry ho an’ ny famatsiam-bola eo anivon’ ny parlemanta Voahitsakitsaka indray ny fisaraham-pahefana
Notsiahivin’ ny Filohan’ ny Antenimieram-pirenena, Christine Razanamahasoa, nandritra ny fiarahabana ny filoha mivady nahatratra ny taona 2020 ireo asa vita nandritra ny volana maromaro nitsangan’ity andrimpanjakana ity.
Trafikana olona ho any Sina Notanana am-ponja vonjimaika ilay vehivavy Sonia mpanera
Rehefa niakatra fampanoavana teo amin'ny lapan’ny fitsarana Anosy ireo teratany Sinoa mahakasika ilay fanambadiana teratany Malagasy mba hahafahana manondrana vehivavy dia ilay Sinoa vavy mpisera no nahiditra am-ponja vonjimaika.
Ambohijanaka Rongony 20 fototra nambolena tao amina tokantrano iray
Tonga tampoka ny mpitandro filaminana ka tra-tehaka tamina tokantranona fianakaviana iray ny rongony novolena 20 fototra.
Lavanila Antalaha Voasambotra ilay mpanera nisoloky 27 tapitrisa Ar
Lehilahy iray no voasambotry ny Polisim-pirenena CSP1 ny alatsinainy teo teny Analakely noho ny fisolokiana lavanily milanja 27 kilao.